Imigexo ye-H&M ongeke uyiphuthe kuleli hlobo | Bezzia
inhlanganisela ye-H&M imigexo ongeke uyiphuthe
USusana godoy | 17/06/2022 11:00 | Izithako
Safika ngaleso sikhathi sonyaka lapho izingubo zinezintamo eziningi futhi lapho isikhumba singumlingisi obaluleke kakhulu. Ngakho-ke, igcwalisa ngesimo se imigexo efana naleyo H&M enayo. Ngoba kule sizini bathatha kakhulu, ngakho-ke ngeke ukwazi ukumelana nakho konke esikulungiselele kona.
Iqoqo lemibono nokuqedwa okuzonikeza impilo ekubukekeni kwakho okuhle kakhulu. Sekuyisikhathi sokuthi ukubheja emibonweni yoqobo kakhulu futhi ulethe ukunambitheka kwethu okuhle kakhulu. Ngale ndlela, ukubukeka ngakunye esikugqokayo nakho kukunikeza lokho kuthinta komuntu siqu esikuthanda kakhulu. Kufanele nje ukhethe umklamo owuthandayo.
1 Imigexo enezintambo ezintathu kwa-H&M
2 Umgexo wegolide onezimbali ezincane
3 Okhiye abathathu kanye nependant yengidi
4 'Abangane Abangcono'
5 pearl imigexo
Imigexo enezintambo ezintathu kwa-H&M
Enye yezitayela ezinkulu zesizini yilena. Kungumgexo onemicu emithathu.. Ngoba ukuhlanganisa imihlobiso elengayo kuhlale kuyindlela enhle yokunikeza okwangempela ekubukekeni ngakunye esikugqokayo. Kodwa kulokhu, le nhlanganisela akudingekile ngoba umgexo unamajika amathathu ndawonye. Ngakho, ngayinye inesiphetho esikhethekile. Elide kunawo wonke lakhiwe iketango elihle kakhulu elinendondo encane. Ngenkathi kweyesibili sithola uchungechunge lwamabhola amancane ahlobisa ukuze aphethe ngeketanga lezixhumanisi ezinkulu. Ngaphandle kokungabaza, inketho engaphezu kokuphelele ukunikeza okusuka kusitayela sethu.
Umgexo wegolide onezimbali ezincane
Kubonakala sengathi ukuthinta kwegolide kungomunye wabalingiswa abakhulu besizini. Nakuba uma uthanda isiliva, uzophinde ube nemigexo yakho ngaleyo finish. Okwamanje sihlala nabokuqala kodwa ngesimo se-choker. Enye yezinketho eziyisisekelo lapho sikhuluma ngezesekeli. Ngakho-ke, akukho lutho olufana nokuhlobisa intamo ngalokho kukhanya kwegolide futhi ugcwalise ngokulandelana kobuhlalu obuncane njengezimbali. Isitayela esihle kakhulu kuzoba yileso esikuphelezela ngenxa yombono ofana nalona. Ilungele ama-blouse akho kodwa futhi nezingubo zasehlobo zasehlobo.
Okhiye abathathu kanye nependant yengidi
Siqhubeka nombala wegolide kanye nenye yalezi ziqephu esizithandayo. Kungumphumela ophindwe kathathu okhona futhi. Nakuba kulesi simo, sithole ukuthi amaketango ngokwawo asuka ezixhumanisini ezinhle kakhulu kuye kwezinye zohlobo olugoqiwe, olungangempela. Kodwa ngemvelaphi, sinakho kokubili ukhiye kanye nengidi. Imininingwane emibili ephelele esesiyazi ukuthi iyaphelelisana kahle kakhulu futhi manje bazokwenza lokho nakakhulu ezintanyeni zethu.
Uma ufuna ukwenza isipho esihle sasehlobo esizohlala impilo yonke, khona-ke unomunye wemigexo oyowuthanda futhi, nokuningi. Ngoba ukuba nabangane abahle kuhlale kubalulekile ekuphileni kwethu. Ngakho-ke, uma singakwazi futhi ukukugqoka njalo njengentela entanyeni yethu, okungcono nakakhulu. Kuyinto elengayo enenhliziyo enhle lapho amagama athi 'Abangane Abangcono' engabalingiswa okufanayo. Ngakho-ke, ungathatha omunye kanye nalowo mngane omkhulu noma umngane, elinye iqembu. Kumelwe kuqashelwe ukuthi unemizwa efanayo!
Kubonakala sengathi sikhuluma ngemigexo emithathu futhi, emibili efanayo kodwa okwesithathu kuzoba umbono omusha ozowuthanda kakhulu. Ngoba ngaphezu kweqiniso lokuthi lezi ezimbili ezifanayo zenziwe ngenhliziyo ephukile futhi egcwele ama-zircons, umbono uya kweyesithathu ngokungezwani okungukuthi eyenziwe ngochungechunge lwamaparele amancane. Ngaphandle kokungabaza, abantu bangenye yezinketho ezinhle kakhulu futhi njengoba sibona, akulokothi kuphume esitayeleni. Ngakho kufanele sizicabangele. Isitayela kanye nokuqala kuzokhanya kusukela entanyeni yakho. Imuphi kule migexo owuthanda kakhulu?
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » imfashini » Izithako » inhlanganisela ye-H&M imigexo ongeke uyiphuthe
ISan Fermin yaseNavarrese